Booliska waddanka Sweden oo helay meydka weriye Pakistani ah oo la la'aa muddo laba bilood ah
Mogadishu - 02:35:16
Friday May 01, 2020 - 22:13:17 in Wararka by Super Admin
Weriye u dhashay waddanka Pakistan oo magangalyo siyaasadeed ku joogay waddanka Sweden ayaa laba bilood kaddib meydkiisa laga helay webiga Uppsala ee Sweden.
Sajid Hussain oo ahaa Tifaftirihii warsidaha Baloch ee dhanka Internet-ka ayaa la aaminsan yahay in la dilay, iyadoo kooxaha u ololeeya xoriyadda saxaafadda Pakistan ay dilka weriye Sajid ku eedeeyeen sirdoonka Pakistan.
Ninkan oo ahaa 39 jir ayaa 2012-kii magangelyo weydiistay Sweden, waxaana la waayay 2 Maarso xilligaas oo uu ka tegay Stockholm, kuna socday Uppsala, isagoo doonayay inuu soo qaato furayaasha gurigiisa cusub.
Waxa uu Sajid Hussain wax ka qori jiray dadka la waayo iyo dembiyada qorsheysan ee loo geysto shacabka gobolka Balochistan ee Pakistan.
Xaaska Sajid oo u warramaysay wargeyska ‘Down’ ee Pakistan ayaa sheegtay in ka hor intii ninkeedu uusan magangelyo weydiisan Sweden uu dareemay in ay dhaq dhaqaaqiisa la socdeen sirdoonka Pakistan, waxaana jirtay mar gurigiisa loo dhacay oo laga qaatay Laptop-kiisii iyo warqado muhiim ahaa, taasoo keentay in September 2012 uu u cararo Sweden, dibna ugu noqon waayo dalkiisii.
Dhanka kale Booliska Sweden ayaa sheegay in illaa iyo haatan aysan haynin wax caddeyn ah oo muujinaya in Sajid ay khaarijiyeen sirdoonka Pakistan.